Archive du 20191016
Kolikoly an-jatony miliara Efa tafatsoaka any Frantsa i Peta
Voarohirohy amina kolikoly avo lenta an-jatony miliara ariary Rtoa Razafindrabakoarisoa Marie Jocelyne Léonard na Peta.
Mpahay lalàna Rivellino Ravelomahazo “Mila manao kaongresy ny mpanohitra”
Mety ho antony tsy nampiharan’ny fitondrana teo aloha ny sata mifehy ny mpanohitra, hoy ny mpahay lalàna, Rivellino Ravelomahazo,
Antenimieram-pirenena Manomboka ny adihevitra mafana…
Araka ny and. faha-75 ao anaty lalàmpanorenana dia misy ny fampiantsoana fivoriana ara-potoana, haharitra 60 andro, izay atrehin’ireo solombavambahoaka.
Madagasikara-Kaomoro Hohamafisina ny fiaraha-misa
Nigadona tao Beit-Salam, Nosy Kaomoro ny folakandron’ny 14 oktobra 2019 ny delegasiona notarihin’ny praiminisitra sady minisitry ny raharaham-bahiny misolo toerana Ntsay Christian.
Fananganana Tana-masoandro Mifanenjana ny samy depiote
Miteraka resabe tao anaty herinandro maromaro ny fanaganana tanàna vaovao eny anivon’ny fiarahamonina. Samy maneho ny heviny ireo mpanao lalàna:
Raharaham-pitsarana malagasy Milona loatra, hoy ny Maitre Olala
Marina ny tenin’ny filoham-pirenena, ny minisitry ny fitsarana ary ny Amnesty international, hoy ny mpahay lalàna Olala na Willy Razafinjatovo,
Olona manana fahasembanana Hofanina ho matihanina amin’ny kanto
Nosokafana omaly ny hetsika mitondra ny lohateny hoe “Festival inclusive pluridisciplinaire” andiany voalohany izay hifarimbonan’ireo olona manana fahasembanana sy tomombana ara-batana etsy amin’ny Parvis Analakely.
Mendri-piderana-Miaramilan’ny ZRPS Delta Nanampy ireo tanora tra-doza tany amin’ny RN4
Nijanona nanampy ary nitondra ireo maratra mafy ao Maevatànana ny miaramila ao amin'ny ZRPS DELTA omaly raha nahita lozam-pifamoivozana tamin'iny lalam-pirenena faha efatra iny.
Edito Miandry ny vahoaka
Nisy habaodoana nokoloina teny foana mba ho moana ny vinany ary jenjina ny saina, hoy ny mpahay tantara sady poeta, iray izay.
Loza tetsy Analakely Karana 2 tapa-tongotra sy vaky loha
Teratany karana anankiroa nandeha moto andaniny, ary teratany sinoa nitondra fiara ankilany no tra-doza tetsy Analakely omaly.
Fandrindrana ny fifamoivoizana Fepetra maromaro noraisin’ny CUA
Ho fanamafisana ny fanalalahana ny lalana, mba tsy hisian’ny fitohanan’ny fiarakodia lavareny manomboka eo Analakely mihazo an’i Behoririka mankeny Ankazomanga,
PARAKY SOANIERANA Fatin-dehilahy nihohoka tao anaty tatatra
Lehilahy iray manodidina ny 45 taona eo ho eo no hita faty nihohoka tao anaty tata-drano tetsy Paraky omaly.
Entana tamina fiarabe nampiahiahy Sarona teny amin’ny lalam-pirenena faha-7
Olona efatra mpiray tsikombakomba miaraka amin’ny mpamilin’ilay fiara feno entana tsy nazava no voarohirohy ary eo am-panohizana ny fanadihadiana ny vondron-tobim-paritry ny zandary ao Ambatolampy.
TSY FANARAHAN-DALANA Manadio ny olony ny polisim-pirenena
Fiverenana an-doharano. Manoloana ny tsy fanarahan-dalana hita eo amin’ireo mpitandro filaminana, tapa-kevitra tanteraka ny tomponandraikitra eo anivon’ny polisim-pirenena fa atomboka amin’ireo mpianatra ny fisorohana izany.